I-Semalt: I-Plugin ye-Plugin ye-WordPress - Amathiphu awusizo
I-plugin ye-WordPress yangokwezifiso inomklamo wayo ohlukile, ukusebenza okuqondile nezici ezithile ezizofanisa ibhizinisi lakho. Kunamakhulu kuya kwezinkulungwane zama-plugin amahhala ne-premium, kodwa i-plugin ye-WordPress yangokwezifiso ayinayo enye indlela ongayilungisa ngayo futhi ukhulise imisebenzi yayo ngokuvumelana nezidingo zakho kanye nokulindela. Ngenkathi kunzima kakhulu ukuvula amakhasimende ku-intanethi, usengakwazi ukudala ama-plugin we-WordPress amahle futhi ukwandise ukuthengisa kwakho.
URoss Barber, onguchwepheshe onguchwepheshe we-Semalt Wezinhlelo Zedivolumu, ugxile ekutheni izinkampani nabathuthukisi baqonda ukuthi abasebenzisi abafuni ukukhokha kakhulu ama-plugin we-WordPress. Yingakho iningi lama-plugin alungelekile futhi alikho izindleko, okusho ukuthi ungakwazi ukulayisha ngokushesha, ukufaka nokuwenza kusebenze. Abathuthukisi bezinhlobonhlobo zewebhu nabanjiniyela banikeza izixazululo ezinhle kakhulu ezinkingeni ezihlobene ne-plugin, futhi izintengo zibonakala ziphakeme. Ngokusekelwe ezimfuno zakho zebhizinisi, ungakwazi ukukhetha ama-plugin yamahhala noma izinguqulo ezikhokhelwayo.
Qonda amanani we-plugin ye-WordPress
I-plugin ngayinye yesiko ye-WordPress yakhiwe kumakhasimende ngabanye, futhi izindleko ziyahlukahluka ngokususelwa esikhathini esingakanani umlobi asithathile ukwakha. Ama-plugin we-WordPress afika ebangeni elikhulu, futhi amanani abo ahlukahluka enkampanini kuya enkampanini..Amanani entengo ye-plugin umsebenzi wezinto ezimbili eziyinhloko: unjiniyela oye wakha i-plugin ethile nesikhathi esithathayo ukudala nokuvula i-plugin yakhe ngaphandle kokuyekethisa ikhwalithi. Uma ususha ku-WordPress futhi ungazi lutho ngama-plugin namanani abo, kufanele ukhumbule amaphuzu alandelayo:
1. Buza azungeze futhi uthole ukulinganisela kokuxakama kwe-plugin yakho ye-WordPress:
Okokuqala, kufanele ucele nxazonke ukuthola izilinganiso zendlela ama-plugin asebenza ngayo nokuthi zinkimbinkimbi kangakanani. Ukuze uthole ukuthi kunzima kangakanani i-plugin yakho ye-WordPress, ayikho indawo yezochwepheshe ze-IT. Uma wazi konke mayelana nonjiniyela futhi unomqondo wokuthi zingaki ama-plugin asevele aqalise, kuzoba lula kuwe ukulinganisela izindleko noma intengo ye-plugin. Ngalokhu, ungajoyina amaforamu we-WordPress esemthethweni, ama-WordPress subreddits, namaqembu e-WordPress ku-intanethi. Buza imibuzo futhi uxhumane nabantu abadala ukuze bazi ukuthi malini ama-plugin azokukhokhela nokuthi yiziphi abalobi abangcono kakhulu kule mboni.
2. Amanani we-plugin ye-WordPress yangokwezifiso
Kusobala ukuthi amanani ama-plugin we-WordPress angokwezifiso azohluka futhi ayoxhomeka ukuthi zingaki izibuyekezo ezihle namazwana abatholile. Ngokuvamile, ochwepheshe be-WordPress nabathuthukisi bayaqonda ukuthi amanani awakwazi ukufana nama-plugin ahlukene ahloselwe ukwenza imisebenzi ehlukahlukene.
3. Ukufunda ngokujwayelekile
Kufanele uzame ukuqonda ubunzima be-plugin ye-WordPress yangokwezifiso ngaphambi kokulinganisela intengo yayo. Uma kunzima kakhulu i-plugin, ukuphakama kuyoba ngamanani ayo. Ama-plugin oyibona ku-akhawunti yakho ye-WordPress enza inani elinganiselwe lemisebenzi futhi awunayo izici eziningi. Futhi uma unewebhusayithi yezobuchwepheshe noma ufuna ukukhulisa ibhizinisi lakho ngesikhathi esithile, akufanele uncike kulawo ma-plugin mahhala futhi esikhundleni sakho ukhethe ama-plugin we-WordPress angokwezifiso okuzokhokhela okuthile kusuka ku-$ 10 ukuya ku-$ 900.